तरुण दल महाधिवेशन: को हुन् केन्द्रिय सदस्यका उम्मेदवार लामिछाने ?
By नवीन सन्देश on	 २७ कार्तिक २०७३, शनिबार ०८:२२ · व्यक्तित्व
काठमाडौँ । लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय सुरज चन्द्र लामिछानेले यो पटक तरुण दलको चौथौं महाधिवेशनमा प्रदेश नं ३ वाट केन्द्रिय सदस्य पदका लागि उमेद्द्वारी दिएका छन् ।
बि.स २०३० माघ ६ गते जन्मेका लामिछाने २०४२ सालदेखि राजनीतिमा संलग्न छन् । बिद्यालय तहदेखि नै नेबिसंघको सदस्यता लिएर राजनीतिमा सक्रिय लामिछानेले २०४६ सालको जन आन्दोलनमा समेत सक्रिय भूमिका निभाएका थिए ।
त्यसयता २०४८ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीति सक्रिय लामिछाने राजनीतिमार्फत नै देशको मुहार फेर्न सकिने बताउछन । बिस २०५७ सालमा नेबिसंघ तर्फबाट त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस, कीर्तिपुरमा स्ववियु उमेद्वार बनेका थिए । त्यसै गरि २०५८ सालमा काठमाडौँ नगर समितिमा मनोनितमा परेका थिए । २०६२/०६३ को जान आन्दोलनमा पटक पटक धर पकडमा परेका लामीछाने कांग्रेसको १२ औ महाधिवेशनमा काठमाडौँ १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए ।
नेपाली कांग्रेसको बिज्ञान तथा प्रबिधि विभागका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका लामिछाने १३ औ महाधिवेशनमा क्षेत्र न १ बाट महा समिति सदस्य प्रतिनिधि थिए ।
३१ श्रावण २०७३, सोमबार १६:०० 0
नेविसंघ चुनाव: खुला महिलाबाट सह–महामन्त्रीमा भिड्दै डिग्री टपर सचिता
२५ श्रावण २०७३, मंगलवार ०७:५१ 0
मोफसलका प्रतिनिधिको पहिलो रोजाई हिमाल
२२ श्रावण २०७३, शनिबार ११:४५ 0
नेविसंघका शसक्त दाबेदार को हुन् तारक के.सी ?
काठमाडौँ । टीसीएलले फेरि पनि आफ्नो नयाँ आयाम र उत्पादनहरुको डिजाइन ...
को हुन् दुर्घटनाग्रस्त हेलिकोप्टरका पाइलट रञ्जन ? (हेर्नुस उनले खिचेका १० फोटो)
काठमाडौँ । सोमबार दुर्घटनाग्रस्त फिस्टेल एयरको हेलिकप्टरका पाइलट झापा चारआलीका स्थायी बासिन्दा हुन् । रञ्जन ...
बलिउड नायीका अनुष्का शर्मा
यी पाकिस्तानी माेडल बिना मल्लीकले अश्लीलताकाे अाराेप खेप्दै अाएकी छिन् ...
नायिका प्रियन्का कार्की माेमाेत्सवमा
छॊरीका साथ एेश अभिषेक
फोटोफिचरमा हेर्नुहोस् टोपी दिवसको रौनक
काठमाडौँ १७ पुस । ‘नेपाली पोशाक लगाऔं, राष्ट्रियता जोगाऔं’ भन्ने नारासहित ...